Liibiya oo waalatey caruur 7 sano jir ah oo dagaalka qayb ka ah (Sawiro) – SBC
Liibiya oo waalatey caruur 7 sano jir ah oo dagaalka qayb ka ah (Sawiro)
Way dhoolo cadeynayaan, wajiyadoodana waxaa ka muuqata dhiiranaan iyo inay u xiiso qabaan hawshan qori sidashada, furfurida qoryaha & inay xabado cirka u ridaan hadii loo baahdana ay furinta tagaan oo ay dagaalamaan.
Wiilashani yar yar oo qaarkood ay 7 sano jir yihiin waxay caawinayaan xoogaga mucaaradka ee ka soo horjeeda Col. Gadaafi, waxaana ay ku sugan yihiin magaalada Misarata.
Inkastoo si buuxda aanay uga muuqan inay furinta dagaalka tagayaan hadana shaqooyin adag oo ciidaninimo ay ku jiraa oo waa ay tababarabayaan iyagoo qoryaha nadiifinaya, iyagoo waliba loo tababaro inay ku dagaalamaan gawaarida dagaalka.
Tan iyo kacdooyinkii shacab ee ka qarxay wadanka Liibiya bishii February ee sanadkan xoogaga mucaarka Liibiya waxay gacanta ku dhigeen badi gobolada Bari ee dalkaasi waxaana ay ka aasaaseen maamul magaalada Benghazi, waxay sidoo kale maamulaan magaalada xeebta ku taal ee Misrata & in badan oo ka mid ah dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaan Nafusa kuwaasi oo dhaca Koonfurta Galbeed ee magaalada caasimada ah ee Tripoli.
Dhinaca kale magaalada Tripoli ee caasimada Liibiya waxaa lagu soo bandhigey boqolaal haween ah oo dhameystirtey tababar ciidan, kuwaasi oo la sheegay in ay ka qayb qaadaan difaaca dalka sida uu sheegay afhayeenka xukuumada Liibiya Mussa Ibrahim, isagoo intaasi ku daray in haweenkan ay u soo baxeen sidii ay isaga difaaci lahaayeen duulaanka NATO.
i support libian troops and muammar al qadaafi instead i support the western
AAD BAA UGU FARAX NAHAY
aad ayaay uxun yihiin waayo iskamacilinkaraa qadaafi